Should I get one? – Ducati 1199 Forum | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, ရုပ်ပုံများ, ratings, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် discusssions
ATV ရင်းမြစ် - သတင်းထုတ်ပြန်ချက် - Nac ရဲ့ / Cannondale POS ... (34624)
'01 1500 FI Drifter, အဘယ်သူမျှမမီးပွား - Kawasaki ဖိုရမ် (10903)
Bajaj Avenger 220: တစ်ဦးကဘက်စုံပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ကယ် Blo ... (9843)
MZ စမှတ်စုများ - Philadelphia တွင်မွငျးစီးစဝီကီ (9479)
ကြတယ်လို့ EFI အစီရင်ခံစာမှာ relay ကိုအမျိုးအစားများအပေါ်မှတ်စုများ (သတိပေးခြင်း: မှိုင်းခြင်းနှင့်ငြီးငွေ့စရာ ... (8953)
VP ပြိုင်ပွဲလောင်စာနောက်ဆုံးရသတင်းများ: VP UNLEADE မိတ်ဆက် ... (8556)
KTM ပြိုင်ပွဲဘလော့ (7965)
Kawasaki ZXR 750 - မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, သတင်း & Advi ... (7207)
ဟွန်ဒါ Wave ကို 125 လက်စွဲပိုင်ရှင်များလမ်းညွှန်စာအုပ်များပြန်လည်ပြုပြင် (7136)
Peugeot မြန်နှုန်း Fight2အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲလက်စွဲစာအုပ်ပိုင်ရှင်များလမ်းညွှန် ... (7000)
Yamaha ထုတ်လုပ်မှု Tesseract ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ပါတယ်? RideA ... (6488)
bajaj Pulsar 150 ပုံစံ, ဆန်းစစ်ခြင်း, နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ထားတဲ့ ... (6141)
Pampanga အဘိဓါန် Karylle Solana နိုင်ငံ H ကိုခုနှစ်တွင်အိမ်လော ... (5675)
KTM Duke 125/200 RaceDynamics PowerTRONIC afte ရ ... (5448)
ဟွန်ဒါ 1960 ကနေခြောက်လဆလင်ဒါဆိုင်ကယ် rc166 (5371)
I also ride my friends 2005 CBR1000RR and 2010CBR1000RR. အဆိုပါ 899 is every bit as fast as the 2010 Fireblade so compared to your modified R1, you won’t regret it, especially after break-in
အဆိုပါ 1198 နှင့် 1199 for me have just too much power for the street. I love doing high RPM full throttle hard exiting coming off corners on high speed (60-90တစ်နာရီမိုင်) very curvy mountain roads. You just can’t do that with the 1199, you can’t.
I’m usually around 8K right AT the apex as I really start accelerating out of it. အဆိုပါ 899 feels like it is made for this style of riding. It’s alreadyahandful on the lower speed 2nd gear turns where the front wheel comes off the ground exiting the corner going into 3rd.
It all just comes down to your skill level, your sense of self preservation, and your respect for laws and the life of others on public roads lol. အဆိုပါ 1199 is just in another league from most other liter bikes and the 899 is plenty.
JMHO. Course for me, I hadadeposit on an 1199S w/ABS and it was going to be $28K OTD. အဆိုပါ 899 ended up being $17K OTD. I would never even consider the base 1199, that’s just me.
Last edited by 92GTA; March 3rd, 2014 တွင် 10:57 AM .
ပထမဦးဆုံးအစီးနင်: 2006 Ducati Monster S2R 1000 – လမ်းမကြီးစမ်းသပ်မှု: ပထမဦးစွာစီးနင်း – Visordown
2012 Husqvarna Nuda 900 ပထမဦးဆုံးအစီးနင် – ဆိုငျကယျသမားမဂ္ဂဇင်း
20.06.2015 | Comments Off on Ducati Monster S4 ကိုဝိုးတဝါး
20.06.2015 | Comments Off on ပထမဦးဆုံးအစှဲ: Ducati Monster 696, ဧရာမသတ္တဝါကြီး 1100, အားကစားဆိုင်ရာဂန္ထဝင်အားကစား…
20.06.2015 | Comments Off on 2014 Ducati 1199 Superleggera ‘ သင်ကမေးပါမှဖူးခဲ့လျှင်, သငျသညျမရနိုင်သလား…
20.06.2015 | Comments Off on Ducati 10981198 အဆိုပါအထူးမော်တော်ဆိုင်ကယ်မောင်းပြိုင်ပွဲပြန်လည်အနက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင်
19.06.2015 | Comments Off on Ducati ဖိလစ်ပိုင် Diavel Cruiser လွှတ်တင် – News
19.06.2015 | Comments Off on OneWheelDrive.Net အဆိုပါ Maddest Compo - Ducati Multistrada 620 vs…
19.06.2015 | Comments Off on Ducati 916 – ဆိုင်ကယ်, ဒဏ္ဍာရီ – စာမျက်နှာ2– အင်္ဂါရပ်များ – Visordown
ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက် ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို ဆူဇူကီး AN 650 ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို ဟွန်ဒါ DN-01 တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် Bajaj Discover Brammo Enertia Moto Guzzi 1000 Daytona Injection Ducati Diavel စက်ဘီး Kawasaki ER-6n ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1 ဆူဇူကီး Colleda CO စမတ် eScooter မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး Ducati 60 သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix Ducati Desmosedici GP11 Aprilia Mana 850 Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက်
ထိပ်တန်း 10 Motorcyles တစ်ဦးက Man wow Tech မှသတ်မှတ်ချက်များဆင့်ဆိုရမည်မှာ Make, reviews, News, စျေးနှုန်း…
Ducati ဖိလစ်ပိုင် Diavel Cruiser လွှတ်တင် – News